ရောင်းပြီး / ငှားပြီး - လုံးချင်းအိမ် - ကမာရွတ်
အိမ်တွင် ပါကေးအပြည့်ခင်းထားပီး၊ အိမ်သာနှင့် ရေချိုးခန်းတွင် ကြေွပြားခင်းပီး၊ခြံထဲတွင် ကျယ်၀န်းသော...
တိုက်ခန်းသည် ပထမထပ်ဖြစ်သည်အပြင် လမ်းမတန်းဖြစ်ပြီး ကားမှတ်တိုင်နဲ့နီးသောကြောင့် သွားလာရလွယ်ကူပါသည်...
9 floor condo for rent
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ9floor 1200sqf အက ျယ်ရှိိသည့် condoတစ်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။ မိသားစုနေထိုင်ခြင်...
ရောင်းပြီး / ငှားပြီး - လုံးချင်းအိမ် - မရမ်းကုန်း
သုံးထပ်တိုက်ဖစ်ပီး ကျယ်၀န်းသော နေရာနှင့် အခန်းတိုင်းကို သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ ဖွဲ ့စည်းထားပီး တစ်အိမ...
Beautiful2and Hlaf Storey Home with Fully Furnished. Lift, 10 Air Conditions. Mini Bar,2Liv...